China aluminium ipuleti ipulasitiki ifektri kanye nabaphakeli | I-Jixiang
Izici zokusebenza ezivelele zomkhiqizo:
1. Inokumelana nomlilo okuhle kakhulu nokubambezeleka kwelangabi, futhi ingadlulisa ngokuqinile inqubo eyimpoqo kazwelonke ejwayelekile ye-GB8624 "yokuhlukanisa ukusebenza komlilo wezinto zokwakha", futhi ukusebenza kwayo komlilo akukho ngaphansi kwezinga le-B1;
2. Amandla amakhulu ecwecwe nezakhiwo ezinhle zomshini, ahlangabezana nezidingo zomhlaba wonke ze-GB / t17748 aluminium ipulasitiki eyinhlanganisela;
3. Inqubo yomgogodla wezinto inezimo eziqinile, cishe ayishintshi izimo zokucubungula i-extrusion zepuleti ejwayelekile ye-aluminium-plastic, engahlangabezana nezidingo zomzila wezobuchwepheshe wezinqubo zokukhiqiza zamapuleti e-aluminium-plastic ahlukahlukene ekhaya nakwamanye amazwe;
4. Indaba esemqoka inempahla enhle kakhulu yokuguga komoya-mpilo futhi ingamelana nokushisa okuphezulu nokuphansi - 40 ℃ - + 80 ℃ yemijikelezo engama-20 ngaphandle koshintsho;
5. I-flame retardant equkethwe kokuqukethwe okuyisisekelo inokuzinza okuhle, akukho ukufuduka nemvula, nokumelana kahle kwesimo sezulu, okunqoba ukukhubazeka kwe-halogen flame retardants ejwayelekile engamelana nokukhanya kwe-ultraviolet, ngakho-ke ilungele kakhulu ngaphakathi nangaphandle umhlobiso wokwakha;
6. Indaba esemqoka yomkhiqizo imhlophe noma imhlophe ngokumpunga ngokumpunga, futhi ingalungiswa ibe eminye imibala;
7. Okubalulekile kungukubamba ilangabi okuvikela imvelo nokuhlanzekile, intuthu engenalo i-halogen nentuthu ephansi. Kunzima ngokweqile ukusha. Umthamo wentuthu mncane kakhulu lapho uvutha, futhi akukho gesi onakalisayo nentuthu emnyama. Ayinakho ukungcola futhi ihlangabezana nezidingo zombuso zezinto zokwakha eziluhlaza nokuvikelwa kwemvelo.
Ifanele udonga lwamakhethini nomhlobiso wangaphakathi nangaphandle ngezidingo eziphakeme zokuvikela umlilo.
Langaphambilini Ubuciko obubheke ipuleti lepulasitiki le-aluminium
Olandelayo: Nano self yokuhlanza aluminium ipuleti lepulasitiki